Immisa lacag ah ayaad ka sameyn kartaa Blog Blog? - Baro Blogging Khabiir
Qeybta boostada:Kasbo Lacag Online / Eraybixinta
Waqtiga akhriska:6 Daqiiqado akhri
Meel kasta oo aad ka sameyn karto $100 ilaa dhowr kun oo doolar oo si fudud loogu adeegsado barta WordPress-ka. Ma dhayalsan kartid kobcinta dakhliga iyada oo loo marayo, dhab ahaan, waa inaad lahaataa istiraatiijiyad sax ah, farsamooyinka fulinta.
Shaki kuma jiro inay jiraan dhowr siyaabood oo lacag looga helo internetka. Waad ogtahay inay jiraan isticmaaleyaal badan oo dakhli ka soo saara YouTube, freelancing, iwm. Laakiin wadaagista khibradeyda, midkoodna looma tartami karo helitaanka lacag iyada oo loo marayo WordPress blog.
Inta badan waxaad ka heli kartaa 1000-ka qof ee wax qora ee internetka wax ku qora, Horaantii, gebi ahaanba waxay ahaayeen cusub laakiin Maalmahan, way kasbanayaan $25,000+ bishiiba si fudud. Waxay u dhigantaa inaad lacag kasbato intaad seexanayso.
4 talaabooyinka kaa dhigaya Hubaal inaad ku guuleysato inaad lacag ka sameysato barta WordPress?
Mawduuca Ciyaaraha Beddela ee aad Qorayso
Erayada muhiimka ah ee tartamaya
Xayeysiiska iyo suuqgeynta ku xiran
Gunaanad-lacag ka sameysashada Blog Blog?
Waxaa jira 4 waxyaabaha ay tahay inaad marwalba daryeesho. Adiga oo aan dan ka lahayn waxyaalahan, kuma kasban kartid guusha hore ee inaad lacag ku kasbato barta WordPress.
SEO asal ahaan waa Raadinta Mashiinka Raadinta. Waxay ka dhigan tahay inaad qortid maqaalladaada runtiina waafaqsan oo la fahmi karo matoorada raadinta sida Google Bing iwm. Waxay ku saabsan tahay gudbinta isla maadada sida ku cad wixii la weydiiyay. Waa inaad marka hore waxbartid kadibna aad si ficil ah udhaqangelisaa. Sidoo kale waan sameeyay.
Xaqiiqdii waxay muhiim u tahay siyaabaha loo sameeyo SEO-ka bogga iyo SEO-ka-baxsan. Loogu talagalay bogga SEO, Maalmahan waxaa jira waxyaabo badan oo bilaash ah oo WordPress ah oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo waxyaabahaaga si aad uguhesho google sida makiinadaha raadinta sida Yoast, xisaab xisaabeed labadan ayaa hogaaminaya maalmahan.
Ku dar, Ka baxsan bogga SEO runtii wax badan ayaa laga qabaa waxaa lagu qeexay helitaanka maamulka websaydhka iyada oo dib loogu xirayo websaydhkaaga degmooyin dhowr ah oo awood leh. Laakiin waxaan ku nool nahay 21 qarnigii Google wuxuu horumar ku filan la gaadhay teknolojiyad u gaar ah, oo og waxa ku habboon ama aan khusayn. Haysashada degel cusub oo qiimihiisa lagu sii dhisayo backlinks markiiba waa mid aad u adag. Qaar badan ayaa laga yaabaa inay sheegtaan inay macquul tahay run ahaantii. Waxay adeegsadaan farsamooyinka madow si ay u dhisaan sumcadda hal mar. Cusboonaysiinta qalabka raadinta ayaa aad u soo noqnoqda maalmahan ,farsamooyinkan khaldan kuuma caawin doonaan.
Xitaa waxaan furay degel cusub 3 bilo ka dib. Ma sameynin hal backlink. Waan qoray 25 maqaallo mid kasta oo ka mid ah 2500 ereyada. Ka baxay 25 maqaallada, 5 maqaallada ayaa lagu kala saarayaa meesha ugu sarreysa. Runtii tani way fiicantahay marxaladda bilowga ah.
Maxaan ugu tiirsaneyn gadaal gadaal?
Waa sababta oo ah Google ayaa leh 200 oo lagu daray calaamadaha darajada. Haddii aad siineyso macluumaad laxiriira SEO-ga saxda ah ee ku yaal bogga, iyo runtii ereyada muhiimka ah ee tartanka, kani hubaal booskaan waad ku fiicantahay. Adiguna waxaad ahaan doontaa siddayda oo kale. Darajadaada blog-ka ee WordPress oo aad si fudud ugu bilaabi karto wax ku kasbashada gudaha 3 ku 4 bilood.
Niche asal ahaan mawduuc aad qori doontid. Waxay noqon kartaa wax kasta oo waxbarasho, farsamada iyo aaladaha, nolosha hacks hacks, qurxinta guriga iwm. Hadaad khibrad kuhesho SEO, intaas ka dib waxaad u baahan tahay inaad eegto mowduuca faa iidada leh ee kaa soo gali kara dakhli fiican.
Marnaba kama indho tiri kartid dhinacan. Waxaan soo arkay dhacdooyin badan oo guuleystey oo fashilmay niche awgeed. Tani si isku mid ah ayey muhiim u tahay sida aad u sameyso SEO si aad u qorto maqaal. Anigu shakhsi ahaan waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso shuruudaha qaarkood ee helitaanka niche.
marka hore, mawduucaagu waa inuu lahaadaa mug raadis wanaagsan, isticmaaleyaashu waxay raadiyaan keywords kala duwan. Marka labaad, waa inaad aqoon badan u leedahay arrintaas. Ugu dambayn, fiiri qiimaha eraygaas muhiimka ah.
Tusaale ahaan-Marxaladda ugu horreysa, Waxaan ku bilaabay safarkayga qorista maansooyinka luqadda maxalliga ah. Waxaan sidoo kale hayey macluumaad aad u weyn oo ku saabsan. Dadku sidoo kale waxay raadinayeen noocyo kala duwan oo maansooyin ah. Laakiin ka waran qiimaheeda. Ma lahan rajo wanaagsan oo dakhli abuuri karta. Waxaan xasuustaa inaan qoray 50 maqaalo badan, hadhow helayaan dhawr doolar oo aad u hooseeya. Ka mid ah 50 maqaallada, 25 + maqaallada adduunka ugu sarreeya 5 jagooyinka. Websaydhku wuxuu lahaa SEO wanaagsan laakiin aan la isticmaalin. Haddii aysan dakhli ii soo saari doonin. Goor dambe ayaan isaga tuuray. Waqtigaas ficil ahaan, Waan fahansanahay Niche waxyaabo badan.
Waxaan shaqsiyan kugula talinayaa inaad u tagto tiknoolajiyada Misbaax. Maalmahan, tan ayaa kugu soo laaban doonta adiga oo weyn. Waxa kaliya ee ay tahay inaad tixgeliso waa kharashka gujinaya waxaan ula jeedaa CPC ee eraygaas muhiimka ah. Waa inay noqotaa hareeraha 5 ku $10 dollar. Mar dambe, waad sameyn kartaa suuq geyn la shaqeysa oo waad la socon kartaa si kor loogu qaado dakhliga.
Marka ay timaado ereyada muhiimka ah ee tartanka, hel ugu yaraan 25 ku 30 ereyada ka hor intaadan bilaabin qorista baloog. Erayo fure ah oo aan cidina ka qorin maqaallo ku saabsan. Waa maxay sababta aan u leeyahay cidina waxba kama qorin. Sababta maxaa yeelay waxaad ku jirtaa marxaladda bilowga, markaad kobcinayso boggaaga, markaa waxaad bilaabeysaa inaad beegsato ereyada muhiimka ah ee tartamayaashaada. Tani waa shuruudaha saddexaad ee si isku mid ah muhiim u ah xulashada niche iyo sidoo kale sameynta SEO loo baahan yahay.
Markuu qof bilaabo inuu taraafikada ka helo websaydhka. Midkood wuxuu xiiseynayaa inuu lacag ku sameeyo degel iyada oo loo marayo xayeysiis ama suuq-geyn ku-xirnaan. Kuwani waa labada dariiqo ee ugu caansan ee dadku dakhliga ku soo saaraan. Haddii aad diirada saareyso xayeysiiska. Anigu shaqsiyan waxaan kugula talinayaa inaad ka hesho ogolaansho Google AdSense laakiin waa inaanad ku isticmaalin xayeysiiska Google boggaaga. Maalmahan degellada cusub waxay helayaan waxoogaa dinaar ah. Markaad kasbato tiro badan oo taraafikada boggaaga halkii aad ka heli lahayd AdSense waa inaad u tagtaa Ezoic ama Mediavine. Labadan waa barnaamijyo caan ah maalmahan. Tani waxay soo celin doontaa qiimaha dhabta ah ee shaqadaada adag. Waxaan arkay sheekooyin badan oo guul ah oo kasbanaya kumanaan kun oo doolar oo xayeysiis kaliya u adeegayaan.
Marka taa laga reebo, bogagga cusub, Shakhsiyan waxaan dareemayaa inaan laad bilaabayo safarkooda ku dhex jira suuq geynta inta aan diiradda saari lahaa xayeysiinta kaliya. Tani waxay yareyn doontaa shaqadaada adag markii aad bilowdo inaad aragto xoogaa dakhli ah oo aad si otomaatig ah u dhiirrigeliso oo aad wax badan u shaqeyso si aad u kasbato wax badan. Waxaad halkan ku arki kartaa qaar ka mid ah adeegyada ugu fiican ee martigelinta WordPress halkan…
Hal shay ayaan doonayaa inaan ku cadeeyo halkan, Ku qorista qoraalka ayaa ah wax aan shaki ku jirin inay waqti qaadato 7 bilood ilaa 9 bilo si aad natiijooyin u aragto laakiin markii aad bilowday inaad lacag kasbato, way sii kori doontaa tanina weligeed ma dhamaanayso. Guud ahaan, waa hawl aan dhammaanayn.
Maxay kuwa kale Akhrinayaan?
Ma iibsan karaa magac domain oo ma u isticmaali karaa Meel kasta?
Post HoreSida loo Abuuro Bog WordPress ah oo aan marti gelin?
Post NextWay Adag Tahay Inaad Lacag Ku Samato Suuqgeyn La Wadaaga?
Juunyo 26, 2021